Ukuphikiswa kwe-Agenda Justice 2022 ▷ kubenze bavuselelwe LAPHA! | Ukwakheka nezifundo
Lapho sicabanga ngokusebenza ezikhundleni ezahlukahlukene ze-Administration of Justice, kufanele sisebenzise ezimbalwa ukuphikisana nobulungiswa. Ngaphakathi kwazo, sithola izikhundla ezintathu okufanele sizicabangele futhi esizokhuluma nazo ngokujulile namhlanje, ukuze ukwazi ukulungiselela izivivinyo zakho ngendlela engcono kakhulu.
I-Agenda ukuphikisana nobulungiswa
Ukuphathwa kwenqubo - Ithuba lamahhala
Kufaka phakathi isilabhasi, izivivinyo, ukucabanga okusebenzayo, izivivinyo mbumbulu nokufinyelela kuzinsiza eziku-inthanethi zamahhala.
Thenga Umq. I>
Thenga iVol. II>
Thenga uVol. III>
Ukuphathwa kwenqubo - Ukuphakanyiswa kwangaphakathi
Ukucubungula inqubo - Ithuba lamahhala
Ukuqhutshwa kwenqubo - Ukuphakanyiswa kwangaphakathi
Inqubo Yokuphatha Ngokwenqubo Nokuphatha
Lezi Ukuphikisana kungokwesigaba A2Ngakho-ke, ukuze ukwazi ukuzibonakalisa kubo, udinga iDiploma, i-technical Engineering noma okufanayo. Ngaphezu kwalokho, kufanele ube ngaphezu kweminyaka eyi-18, ngobuzwe baseSpain, ungavunyelwa ukwenza imisebenzi futhi ungabi nerekhodi.
Inani lezindawo belilokhu linyuka ngezivivinyo zokwahlulela. Ngakho-ke ayigxili kuphela emzimbeni weProcedural Management, kepha kokunye okubili. Ngo-2016 kutholakale indawo ephezulu kakhulu yezindawo, kanti ngo-2017 zingaphezu kuka-3.500 2018. Ngenkathi ngo-3.593 2019 kunikelwe. Ngokusobala, izindaba ezinhle ukuthi izindawo zizoqongelela. Ngakho-ke ekuqaleni kuka-XNUMX, kuzovela ucingo olusha, olunerekhodi lezindawo.
Kulinganiselwa ukuthi izivivinyo ezifanayo zenzeka maphakathi nonyaka ka-2019, njengoba kwenzekile eminyakeni edlule. Kuyiqiniso ukuthi yonke le datha ngesimo sezibalo ihlanganisa izinhlaka ezintathu eziyinhloko zokuphikisana nokwahlulela. Ngoba kuProcedural Management, izikhundla zehla kancane. Kubo bonke, babiziwe abangama-506 kuphela.Manje kusele ukulinda amasamanisi amasha ongawathola kuwebhusayithi yoMnyango Wezobulungiswa.
Incenye I: Umtsetfosisekelo, emalungelo lasisekelo nekuhlelwa kweMbuso.
Isihloko 1: Umthethosisekelo waseSpain wango-1978.
Isihloko 2: Ilungelo lokulingana nokungabandlululwa. Izindlela zokuvikela ukulwa nodlame lobulili.
Isihloko 3: Uhulumeni Nezokuphatha.
Isihloko 4: Inhlangano yezwe yoMbuso.
Isihloko 5: I-European Union.
Ingxenye II: Ukuhleleka nokwakheka kwezomthetho.
Isihloko 6: Amandla Obugebengu
Isihloko 7: Ukuhleleka nokuphathwa kwezinkantolo nezinkantolo I.
Isihloko 8: Ukuhleleka nokuphathwa kwezinkantolo kanye nezinkantolo II.
Isihloko 9: Ubulungiswa Bokuthula.
Isihloko 10Amalungelo ezakhamizi ngaphambi kobulungiswa.
Isihloko 11: Ukwenza kwesimanje kwehhovisi lezobulungiswa: ihhovisi lezomthetho elisha.
Isihloko 12: Unobhala wejaji.
Isihloko 13: Izisebenzi zezisebenzi zikaHulumeni ezisebenza eMnyangweni Wezobulungiswa.
Isihloko 14: UJenene Corps I
Isihloko 15: UGeneral Corps II.
Isihloko 16: Inkululeko yobumbano. Ilungelo lokuteleka. Impilo nokuvinjelwa kobungozi emsebenzini.
Ingxenye III: Izinqubo zomthetho
A) Imithetho ejwayelekile yazo zonke izinyathelo zomphakathi.
Isihloko 17: Imibuzo ejwayelekile ngenqubo yombango I
Isihloko 18: Imibuzo ejwayelekile ngenqubo yombango II
Isihloko 19: Amandla negunya.
Isihloko 20: Indawo nesikhathi samacala okwahlulela.
Isihloko 21Izenzo zenqubo yejaji nomabhalane wasenkantolo.
Isihloko 22Izenzo zokuxhumana nezinye izinkantolo neziphathimandla.
Isihloko 23: Izenzo zokuxhumana kumaqembu nakwabanye ababambe iqhaza kule nqubo.
Isihloko 24: Ifayela lezobulungiswa kanye nemibhalo.
B) Izinqubo zomphakathi
Isihloko 25Inqubo yokumemezela kumthetho wenqubo yomphakathi.
Isihloko 26: Isivivinyo esijwayelekile.
Isihloko 27: Ukwahlulela ngomlomo.
Isihloko 28Izinqubo ezikhethekile I: Izinqubo zokwahlukaniswa kwempahla kwezomthetho.
Isihloko 29Izinqubo ezikhethekile II: Ukukhokhelwa kwenqubo yokukhokha kanye nokwahlulela kokushintshisana.
Isihloko 30Izinqubo zomshado nezigaba zabo. Inqubo yokukhubazeka kwabantu.
Isihloko 31Izinqubo zokuphatha ngokuzithandela.
Isihloko 32: Izinsizakusebenza.
Isihloko 33Izinsiza ezingavamile.
Isihloko 34: Ukubulawa ngenkani.
Isihloko 35: Ukubulawa kwemali.
Isihloko 36Inqubo yokuphoqelela.
Isihloko 37: Ukubulawa okungeyona imali.
Isihloko 38: Izinyathelo zokuqapha.
Isihloko 39Izindleko nezindleko zenqubo.
C) Ukubhaliswa Komphakathi
Isihloko 40: I-Civil Registry I
Isihloko 41: I-Civil Registry II
Isihloko 42: I-Civil Registry III
D) Inqubo yobugebengu
Isihloko 43: Inqubo yenqubo yobugebengu
Isihloko 44: Amaqembu enqubo yobugebengu.
Isihloko 45: Isifinyezo.
Isihloko 46: Izinyathelo zokuqapha.
Isihloko 47: Isikhathi esiphakathi.
Isihloko 48: Ubufakazi.
Isihloko 49Inqubo efushanisiwe.
Isihloko 50Inqubo yokushushisa ngokushesha ubugebengu obuthile.
Isihloko 51Inqubo ngaphambi kwenkantolo yamajaji.
Isihloko 52: Ukuvikelwa kwezomthetho phambi kwezinkantolo zokuhlukunyezwa kwabesifazane
Isihloko 53Izinqubo zecala lobugebengu bomntwana osemncane.
Isihloko 54Ukuqhutshwa kwecala ngamacala amancane.
Isihloko 55Uhlelo olujwayelekile lokudluliswa kwamacala ezinkantolo.
Isihloko 56: Ukukhishwa kwezigwebo zobugebengu.
E) Izinqubo zokuphikisana nezokuphatha nezabasebenzi
Isihloko 57: Isikhalazo sokuphikisana nokuphatha I: Inhlangano yamandla.
Isihloko 58Isikhalazo Esibangwayo-sokuphatha II: Amandla wenqubo, ukuba semthethweni, ukumelwa kanye nokuvikela. Izenzo eziyinselele.
Isihloko 59: Isikhalazo sokuphikisana nokuphatha III: Izinqubo zokuqala, ukugcwaliswa kwesikhalazo kanye nesimangalo efayilini. Indawo yabamangalelwa nokwamukelwa kwesikhalazo.
Isihloko 60Isikhalazo IV esinokuphikisana nokuphathwa: Isidingo nempendulo. Ukuhlola, ukubuka neziphetho. Izigwebo.
Isihloko 61Inqubo efushanisiwe enkambeni yokuphatha enengxabano.
Isihloko 62Izinsizakusebenza kwinqubo yokuphikisana nokuphatha.
Isihloko 63Izinqubo ezikhethekile.
Isihloko 64: Izinhlinzeko ezijwayele ukuqhutshwa kwempikiswano nezinqubo zokuphatha.
F) Inqubo yokuphikisana nokuphatha kanye neyabasebenzi
Isihloko 65: Inqubo yezabasebenzi.
Isihloko 66: Ukugwema inqubo.
Isihloko 67: Izinqubo ezikhethekile.
G) Imithetho yomthetho wezohwebo
Isihloko 68: Umncintiswano wababolekisi.
Ukuzivocavoca kokuqala: Kuyi-questionnaire yokukhetha eminingi, enemibuzo eyi-100 kanye nemibuzo engu-4 yokubhuka. Amaphuzu amancane amaphuzu angama-50 kanti isikhathi sokuhlolwa imizuzu engama-90.
Ukuzivocavoca kwesibili: Kuyicala elisebenzayo (ngaphambi kokuba kube ngumsebenzi wesithathu). Ingqikithi yemibuzo engama-22, lapho amaphuzu aphansi okuzodlula kuzoba amaphuzu angama-20 futhi kulokhu sizoba nemizuzu engama-45 kuphela.
Ukuzivocavoca okwesithathu: Ukubhala umbhalo, lapho kuzofanele sibhale ngezihloko ezimbili ezikhethwe yiNkantolo. Amaphuzu amancane amaphuzu angama-50 wokuphasa lolu vivinyo. Sizoba namahora ama-4 ukuyiphothula.
Uma ukhetha i- Iphromoshini yangaphakathi, lapho-ke kuzoba nokuzivocavoca okubili kuphela esikhundleni sezintathu.
Ukuzivocavoca umzimba kokuqala: Kukhethwa okuningi ngemibuzo engama-50. Isivivinyo sithatha imizuzu engama-60 futhi amaphuzu akho aphezulu amaphuzu ayi-100.
Ukuzivocavoca kwesibiliImibuzo eyi-10 okufanele iphendulwe ngecala elisebenzayo. Amaphuzu aphezulu amaphuzu angama-50 nesikhathi sokwenza, imizuzu engama-60.
Ngemuva kwesigaba sesikhundla, isigaba sesibili somncintiswano sifinyelelwa, lapho kubalwa khona ukufaneleka. Iziqu zomthetho zengeza amaphuzu ayi-15, izifundo zomthetho ezingafika emahoreni angama-29, engeza amanye amaphuzu ayi-3. Ngenkathi lezi zifundo zisuka emahoreni angama-30 kuye kwangama-59, amaphuzu awu-5 uzonezelwa wona. Ekugcineni, uma zeqa amahora angama-60, lapho-ke amaphuzu akhuphukela ku-8. Izilimi ezisezingeni B1 noma B2 ziyiphuzu elilodwa ngaphezulu. Amaphuzu amabili uma une-C1 noma i-C2.
Imisebenzi kanye nomholo wesikhulu se-Procedural and Administrative Management
Phakathi kwemisebenzi esiyigqamisayo:
Lungisa amanothi wesethenjwa noma izifinyezo zemoto
Sayina uphinde uqinisekise ukubonakala
Lapho sikhuluma ngomholo, kufanele kuthiwe kungahlala kuncike esimweni esithile somsebenzi, noma ngaphakathi kwe-Administration of Justice. Kepha inani lenyanga eliphelele lizungeze ama-euro angama-2.000 2.800 nama-XNUMX euros.
Ukuphikiswa Kwenqubo Yokucubungula
Kulokhu, ukuze ukwazi ukuthatha izivivinyo ukuze uzicubungule, i-baccalaureate noma okulingana nayo kuyadingeka njengeziqu futhi ube ngaphezu kweminyaka eyi-18. Njengoba kwenzekile kuzidingo ze-Procedural Management Oppositions.
Mina ingxenye yenhlangano
Isihloko 1: Umthethosisekelo waseSpain wango-1978
Isihloko 2: Ilungelo lokulingana nokungabandlululwa ngokuya ngobulili. Izindlela zokuvikela ukulwa nodlame lobulili.
Isihloko 3: Uhulumeni nokuphatha.
Isihloko 4: Ukuhlelwa kwezindawo zombuso kumthethosisekelo.
Isihloko 5: Iyuniyani yase-Europe.
Isihloko 6: Igunya elinikezwayo.
Isihloko 7Ukuhleleka nokuphathwa kwezinkantolo nezinkantolo I.
Isihloko 8: Ukuhleleka kanye nekhono lezinkantolo kanye nezinkantolo II.
Isihloko 9Amalungelo ezakhamizi ngaphambi kobulungiswa.
Isihloko 10: Ukwenza kwesimanje kwehhovisi lezobulungiswa: Ihhovisi elisha lezomthetho.
Isihloko 11: Unobhala wejaji.
Isihloko 12: Izindikimba zabasebenzi bakahulumeni abasebenzela ukuphathwa kwezobulungiswa.
Isihloko 13: Imizimba ejwayelekile I
Isihloko 14: Izindikimba ezijwayelekile II.
Isihloko 15: Inkululeko yobumbano. Ilungelo lokuteleka. Impilo nokuvinjelwa kobungozi emsebenzini.
II Ingxenye yenqubo yomthetho
Isihloko 16Izinqubo zokumemezela kumthetho wenqubo yomphakathi: Isivivinyo esijwayelekile nesikhulunywa ngomlomo.
Isihloko 17Izinqubo zokuphoqelelwa emthethweni wenqubo yomphakathi.
Isihloko 18Izinqubo ezikhethekile emthethweni wenqubo yomphakathi.
Isihloko 19Igunya lokuzithandela.
Isihloko 20Izinqubo zobugebengu I: Okuvamile, okufingqiwe kanye nejaji.
Isihloko 21: Izinqubo zobugebengu II: Ukuvivinywa kobugebengu obufushane, ukuqulwa kwamacala ngokushesha nokubulawa.
Isihloko 22: Isikhalazo sokuphikisana nokuphatha: Inqubo ejwayelekile, efushanisiwe futhi ekhethekile.
Isihloko 23Inqubo yezabasebenzi: Inqubo ejwayelekile yokuxoshwa kanye nezinqubo zokuphepha Komphakathi.
Isihloko 24: Izinsiza.
Isihloko 25: Indawo nesikhathi samacala okwahlulela.Isihloko 26Izenzo zenqubo yejaji kanye nomabhalane wasenkantolo.
Isihloko 27Izenzo zokuxhumana nezinye izinkantolo neziphathimandla.
Isihloko 28: Izenzo zokuxhumana kumaqembu nakwabanye ababambe iqhaza kule nqubo.
Isihloko 29: I-Civil Registry I
Isihloko 30: I-Civil Registry II
Isihloko 31: Ifayela lezobulungiswa kanye nemibhalo.
Siyazi ukuthi kunezindawo ezingaphezu kuka-2.000 800 ezihlinzekelwe ubulungiswa. Kepha ngokunembile kulo mzimba, wokucubungula inqubo, bafike kuphela ezindaweni ezingaba ngu-56. Kuzo zonke, ezingama-XNUMX zinamaphuzu ahlukene okwabiwa kwezindawo.
Ukuzivocavoca umzimba kokuqala
Ingxenye I: Imibuzo eminingi yokukhetha enemibuzo eyi-104. Ngama-4 azobekelwa. Le ngxenye ihlala imizuzu engama-75 futhi ihlukaniswe kusuka kumaphoyinti angu-0 kuye kwayi-100. Izimpendulo ezilungile zengeza iphuzu eli-1, kanti izimpendulo ezingalungile zengeza u-0,25. Khumbula ukuthi ezingaphendulwanga azishayi magoli.
Ingxenye II: Imibuzo engama-22 yokuzikhethela mayelana necala elisebenzayo. Lokhu kuhlolwa kuthatha imizuzu engama-45 nezigaba zayo zokuhlukanisa kusuka kumaphoyinti angu-0 kuye kwangama-40. Impendulo ngayinye eyiyo izokwengeza amaphuzu ama-2, izimpendulo ezingezona zisusa amaphuzu ayi-0,50. Ngenkathi abangaphenduliwe, bazoba ngamaphuzu angu-0,25. Ukuze uphumelele lolu vivinyo udinga amaphuzu angama-20. Ngaphandle kwalokho, ngeke usakwazi ukuqhubeka nomsebenzi olandelayo noma ingxenye yokuhlolwa.
Imayelana nokubhala umbhalo eZwini. Kokubili isivinini nefomethi kuyabaluleka. Unemizuzu engu-15 yokwenza le ngxenye. Amaphuzu akho azoba amaphuzu angama-30.
I-Las izindawo ezitholakalayo zokuphakanyiswa kwangaphakathi kokuphikisana nokuqhutshwa kwenqubo bancane. Sinezindawo ezingama-219, ezisatshalaliswa emiphakathini ehlukene ezimele. Ukuze ufinyelele ukukhushulwa kwangaphakathi kukhona nochungechunge lwezidingo:
Yiba ne-bachelor's noma i-technical degree.
Ukuze ube yisisebenzi sikahulumeni somsebenzi ezinhlakeni zosizo lwezomthetho.
Gunyaza iminyaka engaba mibili, njengesisebenzi sikahulumeni, okwesikhashana noma esikhundleni.
Ukuhlolwa kokunyuswa kwangaphakathi kuzoba nokuzivocavoca okubili:
Ukuzivocavoca umzimba kokuqala: Imibuzo engama-50 yokuzikhethela. Uzoba nemizuzu engama-60 ukuqeda le ngxenye. Impendulo ngayinye eyiyo ingeza amaphuzu amabili, bese kuthi impendulo enamaphutha isuse amaphuzu ayi-0,5.
Ukuzivocavoca kwesibili: Dlala umbhalo ku-Microsoft Word kukhompyutha. Lokhu kuhlolwa kuthatha imizuzu engu-15. Yini eyaziswa? Kokubili ifomethi nesivinini sokubhala nentuthuko.
Ngokuthola amaphuzu okugcina, kuzokwenziwa isamba salezi zivivinyo. Kepha kufanele kubhekwe ukuthi isikhundla esiphezulu esizobanjwa sizobaluleka, kanye nezinye iziqu noma izifundo ezivunyelwe.
Imisebenzi yokwenzela umzimba weNqubo yeNqubo
Ukulungiswa kwemizuzu, kanye nezaziso noma inqubo.
Ukuqhutshwa kwezindaba ezahlukahlukene noma ukuqokwa.
Njengakomunye umzimba wokuphikisana nobulungiswa, umholo wokugcina ungahluka njalo. Kepha kufanele kuthiwe i umholo owedlulele nowenyanga kungaba cishe nge-1800/2400 euros.
Ukuphikiswa komsizi wejaji
Kulokhu sibhekene ne- imincintiswano yeqembu C2. Kungakho ukuze sikwazi ukufinyelela kuzo, sizodinga iziqu zesikole noma iziqu ezifanayo. Ngendlela efanayo naleyo eyedlule, kufanele ube neminyaka eyi-18 ubudala futhi ube nobuzwe baseSpain.
Ngaphezu kwamaphuzu ajwayelekile nalawa angaphambilini, kufanele kuthiwe kwabaPhikisi Bokusiza Kwezobulungiswa babekhona cishe izihlalo ezingama-525. Ingqikithi yama-37 yaleyo engu-525 yayisivele ibekiwe kanti yonke eminye iphinde yasatshalaliswa kuzwelonke.
I Ingxenye yenhlangano
Isihloko 4: Ukuhlelwa kwezwe lombuso.
Isihloko 9: Umqulu wamalungelo ezakhamizi ngaphambi kobulungiswa.
Isihloko 10: Ukuvuselelwa kwehhovisi lezobulungiswa.
II Inqubo Yomthetho
Isihloko 16: Izinqubo zokumemezela: Isivivinyo esijwayelekile, ukuqulwa kwamazwi nezinqubo ezikhethekile.
Isihloko 17Izinqubo zokwenza: ezezimali nezingeyona imali.
Isihloko 18: Amacala obugebengu: Okujwayelekile, okufingqiwe, ukuqulwa kwamacala amancane kanye nejaji.
Isihloko 19Izinqubo zokuphatha ezinengxabano: ezejwayelekile, ezifushanisiwe futhi ezikhethekile.
Isihloko 20Inqubo yezabasebenzi - Inqubo ejwayelekile kanye nokuxoshwa. Izinqubo zokuphepha komphakathi.
Isihloko 21: Indawo nesikhathi samacala okwahlulela.
Isihloko 22Izenzo zenqubo yejaji nomabhalane wasenkantolo. Izinqumo Zomnyango Wezezimali.
Isihloko 23Izenzo zokuxhumana nezinye izinkantolo neziphathimandla.
Isihloko 24: Izenzo zokuxhumana kumaqembu nakwabanye ababambe iqhaza kule nqubo.
Isihloko 25: Ukubhaliswa komphakathi.
Isihloko 26: Imiqondo yefayela lokwahlulela nemibhalo.
Kulokhu, ezivivinyweni zokuncintisana zoMabhalane Wezobulungiswa, kufanele uphumelele esivivinyweni kuphela. Kepha yebo, kuzoba nezingxenye ezimbili noma izivivinyo ezimbili okufanele uzicabangele.
Ukuzivocavoca umzimba kokuqala: Isivivinyo uhlobo lwethiyori nokuqeda. Kuzoba ukukhetha okuningi ngemibuzo eyi-104. Amane awo azosala njengesiqiwi. Amaphuzu azosuka kumaphuzu angu-0 kuye kwangama-100. Izimpendulo ezifanele zizokwengeza iphuzu elilodwa, lezo ezingalungile zizokhipha amaphuzu ayi-0,25 kuthi lezo ezingaphenduliwe zingatholelwa amaphuzu. Unemizuzu engaba ngu-75 yokuqedela le ngxenye yesivivinyo.
Ukuzivocavoca kwesibili: Ukucabanga okusebenzayo. Kunemibuzo engama-52 isiyonke, ngoba emibili yayo ibekiwe. Okufanele kungeza amaphuzu amabili, okungalungile kususa amaphuzu ayi-0,5. Kule ngxenye, kufanele kubhekwe ukuthi imibuzo engaphenduliwe noma engenalutho izokhipha u-0,25. Kule ngxenye unesikhathi semizuzu engama-60.
Uma umphakathi ozimele unolimi olusemthethweni, kungahle kube nokuhlolwa okukodwa kulolo limi ukuhlola izinga lalo. Le mincintiswano ibuye ibe ne- 'isigaba somncintiswano'. Kuwo, kuzobhekwa ukufaneleka komphikisi (izihloko, amadiploma noma izifundo ezivunyiwe).
Imisebenzi ezokwenziwa kanye nomholo we-Judicial Aid Corps
Phakathi kwemisebenzi engenziwa umsizi wezomthetho, sizogqamisa okulandelayo:
Gcina ukuhleleka emakamelweni.
Thobelana nama-liens kanye nokukhishwa.
Bangakwazi ukwenza imisebenzi njengamaphoyisa okwahlulela.
Ifayela lamafayela okwahlulela.
Njengomholo ophelele nowenyanga, kufanele kuthiwe a isikhulu salo mzimba sizokhokhisa phakathi kwama-euro ayi-1600 kanye nama-euro angama-2000.